I-SPALA, ETHULE KWAYE KUPHELELE NGOKUPHELELEYO. KUFUTSHANE EBHEKE - I-Airbnb
I-SPALA, ETHULE KWAYE KUPHELELE NGOKUPHELELEYO. KUFUTSHANE EBHEKE
Izindlu zala maxesha ezihonjisiweyo ezikhethekileyo, amagumbi abanzi, igaraji yabucala, iterrace ethe ngqo echibini kunye nemibono elunxwemeni, inegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
I-Complex yamagumbi ambalwa, yonwabela i-idyllic emazantsi eGran Canaria.
I-TV kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala, i-air conditioning, umatshini wokuhlamba impahla, isomisi, ifenitshala yanamhlanje kunye nekhitshi ene-dishwasher, ifriji, i-induction hob kunye ne-microwave.
Ukusuka kwi-terrace unokufikelela ngokuthe ngqo echibini kwaye uhambe uye elunxwemeni.
Le ndawo ineendawo zokutyela, indawo encinci yokuthenga, ivenkile enkulu, isikolo sokusefa, indawo yokutyela elwandle .... Ikwaneteksi kunye nesikhululo sebhasi kufutshane kakhulu nekhompleksi. Ungabhukisha i-spa yakho okanye isekethe ye-massage, intenetya okanye iinkundla zephepha kwaye wonwabele amava ephupha kwi-Orquídea Club Spa ekufutshane.
Umamkeli kunye / okanye abadibanisi abakhoyo kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tarajalillo